Chelsea Oo Kula Biirtay Liverpool, Arsenal Tartanka Alexander Isak'
Wararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Manchester United oo ku dhow Heshiiska Raphael, Sheekada Manuel Locatelli ee Juventus iyo Qodobo kale
Liverpool oo Tixgalineysa inay u dhaqaaqdo Sebastian Walukiewicz.
Roma oo u muuqata mid lumineysa lasoo wareegitaanka Granit Xhaka
Home Wararka Ciyaaraha Chelsea oo kula biirtay Liverpool, Arsenal tartanka Alexander Isak’
Chelsea oo kula biirtay Liverpool, Arsenal tartanka Alexander Isak’
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarineysa dagaal ay la gasho Liverpool iyo Arsenal oo ku aadan saxiixa Real Sociedad weeraryahankeeda Alexander Isak inta lagu guda jiro xagaagan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
21 jirkaan ayaa ku riyaaqay olole xoogan 2020-21 heer kooxeed, isagoo shabaqa soo taabtay 17 jeer 34 kulan oo La Liga ah.
Isak ayaa sidoo kale aragti fiican ka helay labadii kulan ee furitaanka Iswiidhan ee Euro 2020, Liverpool iyo Arsenal labadaba dhawaan ayaa lagu tiriyay inay xiiseynayaan adeegiisa.
Sida laga soo xigtay AS , Chelsea ayaa sidoo kale isha ku heysa weeraryahankaan, kaasoo qandaraaskiisa haatan lagu burburin karo 70 milyan euro oo u dhiganta 60 milyan oo ginni oo lagu burburin karo qandaraaskiisa haatan ee Real Sociedad.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Blues ay u aragto ciyaaryahanka reer Sweden bedel Erling Braut Haaland , oo kooxda wali aysan ku guuleysan heshiiskiisa
Isak ayay ku adkaatay inuu calaamadiisa ku muujiyo Dortmund ka dib markii uu ka soo wareegay AIK 2017, laakiin wuxuu ku riyaaqay intii uu amaahda ku joogay Willem II ka hor inta uusan heshiis rasmi ah ugu biirin Real Sociedad.
Previous articleMaxaa ku soo kordhay Heshiiska Manchester United ee la galeyso Borussia Dortmund iyo Jadon Sancho
Next articleArsenal oo u aqoonsatay xiddig reer Portugal ah bedelka mustaqbalka ee Alexandre Lacazette
Manchester United oo dooneysa inay iska iibiso Anthony Martial xagaagan.
Pavel Nedved ayaa xaqiijiyay in Cristiano Ronaldo uu sii joogi doono Juventus
Wararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Liverpool oo laga soo diiday Dalabkii Federico Chiesa, Heshiis kordhinta Paul Pogba iyo Qodobo kale
Manchester City oo qaab Cusub ku wajaheysa Harry Kane, Tottenham oo aanan celin karin Markaan
Chelsea oo ku Fashilantay Xidiga badali lahaa Booska Haaland loo qorsheeyay
Wararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Manchester United oo ku dhow Heshiiska...
Suuqa kala iibsiga1956